Libanona: Ny Fizahan-Tany No Mandoa Be · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2012 1:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 한국어, English
Ireto ny zava-niseho vao haingana izay nisy fiantraikany tamin'ny sehatry ny fizahan-tany Libane : ny famonoana ny Praiminisitra Libane teo aloha Rafic Hariri tamin'ny 2005 sy ny famonoana mpanao politika maro be nifanesy, ny Jolay 2006 ady tamin'i Israely, ny May 2008 fifandrafesana anatiny teo amin'ireo mpanao politika mpanakorontana, ary ny trangan-javatra vaovao amin'ny fizarazarana amin'ny krizy syriana sy ny fiverenan'ny fakàna olona an-keriny ao an-toerana.
Noho ny fampitandremana ataon'ny masoivoho amin'ireo terataniny handao an'i Libanona, nidina 60 isan-jato ny famandrihan-toerana any amin'ny trano fandraisam-bahiny hatramin'ny faha-14 n'ny volana Aogositra. Tsikaritra ihany koa ny fanafoanana famandrihan-toerana amin'ny fiaramanidina.
Misaona ny fotoanan'ny fizahan-tany ireo Libane mpiserasera amin'ny aterineto. Malahelo i Najib avy amin'ny Bilaogy Baladi :
@rawadkhoueiry: Fizahan-tany amin'ny lohataona any Libanona : Jiro tapaka, ny Elatra Miaramilan'i Mokdad, Làlana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Tapaka, Poa-basy any amin'ny Sisintany Avaratra
@Waelad: Mijaly i Beirut. Trano fandraisam-bahiny foana, toy ny tsy misy ny fizahantany. Ny antony dia mifandray amin'ny ara-pivavahana, ara-paritra ary ny fitsitokotokoana.
@Aamchit: Miha-mandroso ny fizahantany any Libanona. Avy any Damaskosy,Tartous, Homs, Aleppo, Deir El Zor ary tanàna maro hafa ireo olona tonga. #irony (eso)
@BouCha2ra: Vinavinao inona ?! Nahita mpizaha tany aho omaly! \_m/ O.o #Lebanon
@MissZenaH: Nitondra mpizaha tany Turc aho androany… natoroko làlana izy mba hiarovany ny tenany amin'ny fangalàna vahiny an-keriny aty #Libanona
@neruda906: Nisy niteny tany amin'ny Ministry ny fizahan-tany fa manao asa goavana aho aty, mandresy lahatra ny olona rehetra mifanena amiko aho mba tsy hitsidika an'i Beirut 🙂 #Lebanon
@Makoumbinbutti: Ny firenena mpikambana ao amin'ny GCC dia manohana ara-bola an'i Libanona ary manetsiketsika ny fizahantanin-dry zareo & setrin'izany alaina an-keriny ry zareo #awkward#GCC
@alhajji1963: Manomboka izao, ry mpizaha tany avy any Golf, ataovy ankivy i Libanona, fanjakana tsy milamina. Ataovy ankivy izy ireo . Ataovy ankivy izy ireo.
@Borzou: miaraka amin'i #Syria, #Egypta ary ankehitriny #Libanona ilaozan'ny mpizaha tany Arabo mpanankarena avy any Golfa dia sahiko ny miloka fa #Turkey & #Jordan no handroaka ny vola be
6 ora izayAlzeria